« Ampionony, ampionony ny oloko, hoy Andriamanitrareo ; matoria teny soa mahafaly amin’i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny helony » Isa. 40 :1,2
Tao anatin’ny andro maizina indrindra nandritra ny ady lava be nifanaovany tamin’ny ratsy, dia nanambara sy namelabelatra ny amin’ny tanjona mandrakizay izay kendren’i Jehovah ny fiangonan’Andriamanitra. Navela hahita lavitra mihoatra noho ny fitsapana amin’izao vanim-potoana izao ny vahoakany, mba ho amin’ny fandresena amin’ny fotoana ho avy, rehefa vita ny adidiny, ary hiditra handray ilay tany efa nampanantenaina ireo voaavotra. Tokony ho lafo vidy sy manan-danja ho an’ny fiangonan’Andriamanitra amin’izao fotoana izao reny fahitana ny amin’ny voninahitra amin’ny hoavy ireny, izay sary nataon’ny tanan’Andriamanitra, rehefa hifarana haingana ny hery mifanandrina eto amin’ny tantaran’ny tany ary ho tanteraka amin’ny fahafenoany tsy ho ela ireo fitahiana efa nampanantenaina.
Ho antsika izay mijoro manoloana indrindra ny fahatanterahan’izany, hanao ahoana ny halalin’izany fotoana izany, inona ny tombontsoa velona handrandraina amin’izany fotoana soritsoritana izany- fotoana izay nadrandraina sy niandrasan’ireo zanak’Andriamanitra, ary nangatahany amim-bavaka efa hatry ny ela , hatramin’ny fotoana nialan’ny razam-bentsika voalohany avy tao Edena !
Ry rahalahy sy anabavy namana, panara-dia an’i Jesosy, mbola eo an-katoky ny aloky ny fotoan-tsarotry ny zavatra miseho eto an-tany isika ; fa tsy ho ela dia ho avy ny Mpamonjintsika hitondra fanafahana sy fitsaharana . Ndeha isika hibanjina amim-pinoana ny fitahiana amin’ny hoavy araka ny sary efa nataon’ny tanan’Andriamanitra . Ilay olona efa maty tamin’ny fahotan’izao tontolo izao dia manokatra midanadana ny vavahadin’ny lanitra ho an’izay rehetra mino Azy. Tsy ho ela dia ho tapitra ny ady, ary ho azo ny fandresena. Tsy ho ela dia ho hitantsika Izy, ilay ivon’ny fanatenantsika fiainana mandrakizay . Ary eo anatrehany dia toy ny tsy misy dikany ireo fitsapana sy fahoriana teto amin’nity fiainana ity. “Tsy hotsaroana ny zavatra taloha, ary tsy ho tadidy ao an-tsaina akory aza”. “Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana hianareo mba hahazoanareo izay lazain’ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon’Andriamanitra. Fa “rehefa afaka kelikely, dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra. “Fa ny Isiraely kosa ho voavonjin’i Jehovah amin’ny famonjena mandrakizay; tsy ho menatra na hangaihay mandrakizay mandrakizay hianareo”.
Mitrakà, ary miandrandrà, aoka ny finoanareo hitombo mandrakiariva. Aoka izany finoana izany no hitarika anareo amin’ny lalan-tery, izay mitondra anareo ho any amin’ny vavahadin’ilay tanàna tsy takatry ny saina, ilay tanàna midadasika, izay feno voninahitra tsy manam-petra amin’ny hoavy, izay natokana ho an’ny voaavota.